अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन : को होला अबको नयाँ अमेरिकी रास्ट्रपति ? – padhnekura
पढ्ने कुरा सबैको लागी
अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन : को होला अबको नयाँ अमेरिकी रास्ट्रपति ?
विश्वकै शक्तिशाली देश अमेरिकाको नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि ३ नोभेम्बरमा निर्वाचन हुँदै छ । कोरोना महामारीबीच विश्वभर छरिएर रहेका अमेरिकी नागरिकले राष्ट्रपति चयनका लागि मतदान गर्नेछन् । यसपटक रिपब्लिकन पार्टीका डोनाल्ड ट्रम्प र डेमोक्रेटिक पार्टीबाट जो बाइडेन प्रतिस्पर्धामा छन् । अमेरिकी सत्ता परिवर्तनको प्रभाव अमेरिका मात्रै होइन, विश्वभर पर्छ । कसको साथ कुन तरिकाले बिजनेस गर्ने, कुन देशसँग रक्षा–सम्बन्ध कस्तो बनाउने, कुन देशको कुन मुद्दामा समर्थन वा बहिष्कार गर्ने भन्ने मामला पनि नेतृत्व परिवर्तनसँगै परिवर्तन हुँदै आएको छ ।
अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्थामा दुई दलको हालिमुहाली रहँदै आएको छ । यसकारण यिनै दुई दल रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिकबाट नै राष्ट्रपति चयन हुँदै आएका छन् । यसपटक रिपब्लिकनका उम्मेदवार एवं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एकपटक पुनः राष्ट्रपति दोहो¥याउने धुनमा छन् भने डेमोक्रेटिकका उम्मेदवार जो बाइडेन ट्रम्पलाई रोक्ने ध्याउन्नमा छन् । बाइडेनलाई अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले पनि साथ दिइरहेका छन् । राष्ट्रपतिका दुवै उम्मेदवार ७० वर्षभन्दा माथिका छन् । ट्रम्प ७४ वर्षका भए भने उनका प्रतिद्वन्द्वी बाइडेन ७८ वर्षका हुन् । यदि बाइडेन निर्वाचित भए भने अमेरिकी इतिहासमै सबैभन्दा बढी उमेरका राष्ट्रपति हुनेछन् ।
जित हासिल गर्न कति मत चाहिन्छ ?
राष्ट्रपति बन्नका लागि इलेक्टोरल भोट जित्न जरुरी हुन्छ । हरेक राज्यमा त्यहाँको जनसंख्याको आधारमा इलेक्टोरल भोट निर्धारण गरिएको हुन्छ । देशभर कुल पाँच सय ३८ इलेक्टोरल भोट हुन्छ त्यसमध्ये जित्ने उम्मेदवारले दुई सय ७० वा यसभन्दा बढी भोट ल्याउनैपर्ने हुन्छ । यसको मतलब यो हो कि राज्यस्तरका मतदाताले नै कुन उम्मेदवारलाई जिताउने भन्ने निर्धारण गर्छन् । राष्ट्रिय स्तरमा कसलाई कति मत आयो यसको खासै फरक पर्दैन । सन् २०१६ को निर्वाचनमा राष्ट्रपतिकी उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनले राष्ट्रिय स्तरमा धेरै नै मत पाएकी थिइन् । तर, राज्य स्तरमा कम मत आएका कारण उनलाई डोनाल्ड ट्रम्पले पराजित गरेका थिए । तर, दुई राज्यमा एक विजेता–सबै नियमको व्यवस्था छ । यी दुई राज्यमा जसले जित्छ सबै इलेक्टोरल मत हासिल गर्छ । यस्ता राज्यलाई ब्याटलग्राउन्ड अर्थात् रणभूमि राज्य भनिन्छ ।
कसले मतदान गर्न पाउँछन् ?
१८ वर्ष उमेर पुगेका हरेक नागरिकले मतदान गर्न सक्छन् । तर, कतिपय राज्यमा यस्तो कानुन पनि छ कि मतदान गर्न निश्चित कागजात देखाउनुपर्छ । यो कानुन रिपब्लिकन पार्टीले ल्याएको हो । यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण मतदाताले मतपेटिकाको सट्टा हुलाक मतपत्रमार्फत मत दिनेछन् । तर, कतिपय राजनेताले अझै पनि कागजी मतपत्र नै प्रयोग गर्नुपर्ने सल्लाह दिइरहेका छन् ।
राष्ट्रपतिको मात्रै हुँदै छैन निर्वाचन
अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन भनेर चर्चा गरिए पनि यही चुनावबाट अमेरिकी कंग्रेसको नयाँ सदस्य पनि चयन हुनेछन् । अहिले अमेरिकी कंग्रेसमा डेमोक्रेटिक पार्टीको बहुमत छ भने सिनेटमा रिपब्लिकनको बाहुल्य छ । तर, यसपटक सिनेटमा पनि कब्जा जमाउने डेमोक्रेटको लक्ष्य छ । यदि दुवै सदनमा डेमोक्रेटिक पार्टीको वर्चश्व भए डोनाल्ड ट्रम्पको हरेक प्रस्ताव रोक्न सक्छन् । कंग्रेसको चार सय ३५ सिटमा चुनाव हुँदै छ भने सिनेटको ३३ सिटका लागि निर्वाचन हुँदै छ ।
78 years old Biden VS Donald Trump (74)
नतिजा कहिले ?
भोट गन्नका लागि निकै समय लाग्छ । तर, करिब २४ घन्टामै को राष्ट्रपति हुँदै छ भन्ने एकप्रकारको तस्बिर आउँछ । सन् २०१६ को निर्वाचनमा निर्वाचन सकिएको भोलिपल्टै डोनाल्ड ट्रम्प आफ्ना समर्थकहरूसँग खुसी मनाउन निस्किएका थिए । सो क्रममा उनले निर्वाचन जितेको भाषण पनि दिएका थिए । तर, यसपटक केही थप समय लाग्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
यदि डेमोक्रेटिकका उम्मेदवार जो बाइडेनले निर्वाचन जितेमा तुरुन्त राष्ट्रपतिको पद सम्हाल्न पाउने छैनन् । नयाँ राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषद्को सदस्य चयन र योजना निर्माणका लागि केही समय दिइनेछ । विशेषगरी २० जनवरीमा नयाँ राष्ट्रपतिले पद सम्हाल्नेछन् । यो अवसर वासिंटन डिसीस्थित क्यापिटल हिल बिल्डिङको सिडीमा हुनेछ । जसलाई अमेरिकाको संसद् पनि भनिन्छ । यसपछि नयाँ राष्ट्रपति ह्वाइटहाउसतर्फ जानेछन् र आगामी चार वर्षका लागि अमेरिकाले नयाँ राष्ट्रपति पाउनेछ ।
दोस्रोपटक पनि राष्ट्रपति बन्ने अभिलाषाका साथ डोनाल्ड ट्रम्प चुनावी माहोलमा सक्रियताका साथ लागेका छन् । यस्तै उनका प्रतिद्वन्द्वी डेमोक्रेटिक पार्टीका जो बाइडेन पनि पहिलोपटक विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्ने दौडमा छन् ।
कोभिड–१९ बाट संक्रमित हुँदा पनि ट्रम्पले निर्वाचनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । उनले ह्वाइटहाउसबाट आफ्ना कार्यकर्ता र मुख्य जिम्मेवारी बहन गरेका पदाधिकारीलाई निरन्तर निर्देशन दिइरहेका छन् । चुनावी अभियान कमजोर नहोस् भनेर उपचाररत नेसनल सैनिक अस्पतालबाट समेत उनी ह्वाइटहाउस फर्किएका थिए ।
ट्रमका प्रतिद्वन्द्वी वाइडेन पनि सन् १९७० देखि राजनीतिमा सक्रिय छन् । फिजिसियन डा. सिएन कोन्लेयले राष्ट्रपति ट्रम्पले कोभिड– १९ संक्रमणको सबै उपचार पूरा गरेको जानकारी दिएका छन् । डा. सिएनले ट्रम्प छिटै नै चुनावी अभियानमा लाग्न सक्ने पनि जनाए । ‘अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपति ट्रम्पको स्वास्थ निकै राम्रो छ, उहाँको स्वास्थमा छिटै सुधार आएको छ,’ डा. सिएनले भने । ट्रम्पले यसै साता फेरि कोभिड–१९ को परीक्षण गर्नेछन् । यसपटक उनको नतिजा नेगेटिभ आउने डा. सिएनको अनुमान छ ।
प्रेसिडेन्ट डिबेट यसै साता
यसै साता राष्ट्रपति चुनावअन्तर्गत टेलिभिजनमा दोस्रोपटक डिबेट पनि हुने तयारी छ । ट्रम्प भन्छन्, ‘यो समय अहिले प्रत्येक पल महत्वपूर्ण छ, यसैकारण म समय खेर फाल्न चाहन्नँ।’ अहिलेसम्मको नेसनल पोलमा बाइडेनको ५२ प्रतिशत र ट्रम्प ४२ प्रतिशतमा छन् । ट्रम्पको उपस्थिति टेक्सासमा मात्र निकै बलियो छ ।
यसपटकको निर्वाचन सर्वाधिक महँगो हुँदै
एकातिर राष्ट्रपति चुनावको महोल तातिरहेको छ भने अर्कोतिर यसको खर्च पनि उत्तिकै बढिरहेको छ । विभिन्न एजेन्सीहरूका अनुसार सन् २०१६ को तुलनामा यसपटकको निर्वाचनमा ५० प्रतिशत बढी खर्च हुने सम्भावना छ । जसका कारण यसपटकको अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन इतिहासमै महँगो साबित हुने छाँटकाँट देखिएको छ ।
सेन्टर फर रेस्पोन्सिभ पोलिटिक्सले हालसम्मको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ । पोलिटिक्सको खर्च विवरणले सन् २०२० को निर्वाचन अहिलेसम्मकै महँगो हुने देखाएको छ । यसपटक चुनावमा ११ बिलियन डलर खर्च हुन सक्ने सेन्टर फर सेस्पोन्सिभको भनाइ छ । विश्वको विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्रपति चुनावको तुलनामा यो निकै महँगो भएको रेस्पोन्सिभले दाबी छ ।
सन् २०१६ को निर्वाचनमा ६.८ बिलियन डलर खर्च भएको थियो । सन् २००८ पछिको अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन महँगो हुँदै गइरहेको ओपन सिक्रेट्स डाटा ओआरजीले जनाएको छ । सन् २००८ मा ६० हजार करोड नेपाली, सन् २०१२ मा ७३ हजार करोड नेपाली र सन् २०१६ मा ७५ हजार करोड नेपाली खर्च भएको थियो । ओपन सिक्रेट्सले १ जुलाईदेखि २० सेप्टेम्बरसम्मको खर्च डाटा निकालेको हो ।
उनीहरूका अनुसार आउँदो दिनमा थप खर्च बढ्ने अनुमान छ । यता सेन्टर फर रेस्पोन्सिभ पोलिटिक्सका कार्यकारी निर्देशक सिला क्रमहोजले सन् २०२० को राष्ट्रपति निर्वाचनले सबै रेकर्ड तोड्ने दाबी गरेका छन् । सेन्टरका अनुसार अहिलेसम्म १०.८ बिलियन डलर खर्च भइसकेको छ । डेमोक्रेटिकका उम्मेदवार बाइडेनले पहिलो डिबेटका लागि १० मिलियन डलर फन्ड जम्मा गरेको जानकारी दिएका छन् ।
रमाइलो पक्ष के छ भने यसपटकको निर्वाचनका लागि डेमोक्रेटिकले रिपब्लिकनको तुलनामा धेरै रकम संकलन गरेको छ । एक अध्ययनअनुसार डेमोक्रेटिकले अहिलेसम्म पाँच सय ३४ मिलियन डलर जम्मा पारेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पको पार्टीले चार सय २४ मिलियन डलर संकलन गरेको छ ।
कोभिड– १९ को महामारीका कारण यसपटक प्रेसिडेन्सियल क्याम्पियनका लागि खर्चको स्वरूप पनि परिवर्तन भएको छ । तैपनि निर्वाचनको खर्च ह्वात्तै बढेको छ । यसपटक मिडियामा प्रचारप्रसार गर्न पनि दुवै उम्मेदवारले मनग्य खर्च गरेका छन् । चुनावी क्याम्पिनिङका क्रममा अनलाइनमा पनि खर्च बढेको सेन्टर फर रेस्पोन्सिभको दाबी छ । दुवै उम्मेदवारले मेल इन ब्याटलको रणनीति अपनाएका छन् ।
अहिलेसम्म निस्किएको खर्चमा डेमोक्रेटिकले ५४ प्रतिशत तथा रिपब्लिकनले ३९ प्रतिशत चुनावी अभियानमा खर्च गरेका छन् । राष्ट्रपतिको चुनावका लागि विभिन्न व्यक्तिदेखि संस्थागतसम्म आर्थिक सहयोग प्राप्त हुन्छ । यसमा सबैभन्दा धेरै व्यक्तिगत डोनेसन हुन्छ । व्यक्तिगत सहयोगमा ३८.५८ प्रतिशत छ । नितान्त चिनजानबाट सहयोग गर्नेमा १७.७१ प्रतिशत छ । यसैगरी मध्यम किसिमको व्यक्तिगत सहयोगमा २२.२५ प्रतिशत तथा संगठनबाट ३.६२ प्रतिशत आर्थिक सहयोग गरेका छन् ।
प्रकाशित :नयाँ पत्रिका अनलाइनको सहयोगमा
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र पत्नी मेलानियालाई कोरोना संक्रमण
गुगलले सार्वजनिक गर्यो ,आफ्नो नयाँ Social Media App,…
नेपाल प्रहरीमा नयाँ आईजीपीका के छन् चुनौती ?
Previous जिन सम्पादन गर्ने विधिको विकास गर्ने दुई वैज्ञानिकलाई यस वर्षको रसायनशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार
Next WorldLink announces partnership with Facebook Connectivity to deliver fast, affordable and reliable Wi-Fi in Nepal.
त्रिविमा परीक्षाको लहर : कोरोना संक्रमित परीक्षार्थीलाई अलग्गै राखिने, केन्द्रसम्म आउन नसक्नेलाई संक्रमणको प्रमाणका आधारमा पछि परीक्षा
मङ्सिर ९ गते देखि भौतिक उपस्थितिमै कक्षा १२ को परीक्षा हुने
E- : padhnekura@gmail.com